Nweta Free Review nke Blog gị ma ọ bụ saịtị | Martech Zone
Nweta Free Review nke Blog gị ma ọ bụ na saịtị
Na Tọzdee, Septemba 7, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Tinyela mgbalị dị ukwuu na saịtị azụmahịa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ blog, ọ bụ oge na-akụ ya. Anyị dere Nhazi blọgụ maka Dummies iji nyere ndị azụmaahịa aka ịkwado ịde blọgụ iji wuo ikike ma nweta ndu n'ịntanetị. Agbanyeghi na akwukwo a lekwasiri anya na ntaneti na ịde blọgụ, ihe omuma a na-agbatị na webụsaịtị webụsaịtị rue peeji akwụ ụgwọ-kwa-pịa.
Ọtụtụ n’ime unu amalitela ịgụ akwụkwọ ahụ na nzaghachi na-akpali akpali. Anyị maara na anyị nwere onye kacha ere ahịa - mana anyị amatabeghị etu akwụkwọ a ga-esi nweta. Fọdụ ndị na-ede akwụkwọ edenyere onwe ha ma mee ka anyị mara na okporo ụzọ ha na ntụgharị ha abanyelarị na blọọgụ ha n'ime izu ole na ole iji gbasaa ụfọdụ atụmatụ ahụ. Egwu!
Ihe anyị ahụbeghị ruo ugbu a bụ nyocha na Amazon, Ala, Barnes na Noble, Ọdịmma, Adịghị, na mama.
Ọ bụrụ na ị nyochaa akwụkwọ ahụ n'ịntanetị, anyị ga-eme nyocha nke saịtị ma ọ bụ blọọgụ gị ma nye gị ụfọdụ nzaghachi na-arụ ọrụ banyere imewe, njikarịcha njin ọchụchọ, njikarịcha ntụgharị na mmetụta zuru oke. Anyị ga-ọbụna dee ya na post ma kọwaara ndị na-agụ ya ihe ị na-eme. Anyị na-eme nke a na blog a ma kpọọ ya "Blog Tipping"… ha mere maka nnukwu posts!
Naanị iwu bụ gị ga agụrịrị Corporate Blogging for Dummies ị ga-ezigakwa ya njikọ nke nyochaa na-ekwu nke a post. Ozugbo i mere, anyị ga-amalite. Ọ bụrụ na itinye ụfọdụ ọrụ na nyocha gị, anyị ga-etinye ụfọdụ ọrụ n'ime nke gị!
Tags: ígwé ojii Mgbakọakụkọ ihe mere emeigbe nyochamobile echichelaghachi ụzọ ọzọAgbụrụ
Douglas Karr Tuesday, September 7, 2010 Sunday, October 4, 2015
Ntapu, Ntapu, Ntapu… Buy
Social Media + Nchịkọta = Na-ezighị ezi
Dave Woodson kwuru
Sep 11, 2010 na 1:34 PM
Hey ụmụ okorobịa, nnukwu ịhụ gị na Blog Indiana na ekele maka iwetara m Vitamin Water. Ana m abanye n'ime akwụkwọ ahụ, ọ bụ ihe niile ekwere na nkwa.